Singapaoro, “Fampanantenana Poakaty” Ve Ny Fahalalahana Maneho Hevitra? Mitsangam-bolo Ireo Mpikatroka Taorian’ny Nisamboran’ny Polisy Ny Mpanakanto Iray Mpiaka-tsehatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Novambra 2017 12:17 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, русский, Italiano, English
Seelan Palay nijoro nanoloana ny tranon'ny Parlemanta no sady nanao fampisehoana tantara iray tamin'ny fotoana nisamboran'ny polisy azy ho manao “famoriambahoaka tsy nahazo alàlana”. Pikantsary avy amin'ny lahatsarin'ny “The Online Citizen”.
Seelan Palay, mpanakanto sady mpikatroka mpanao politika dia voasambotry ny mpitandro filaminana Singaporiana, ny 1 Oktobra 2017 noho ny fitarihana “famoriambahoaka tsy ara-dalàna” nanoloana ny Tranoben'ny Parlemanta.
Nijoro irery teo anoloan'ny Tranoben'ny Parlemanta i Seelan, mitazona fitaratra iray sahala amin'ny hanao seho ara-kolontsaina. Nentin'ny mpitandro filaminana iray izy ary voatazona tany mandra-pandefany antoka ny andro manaraka.
Na nahazo fahazoandàlana hanao ilay hetsika tao anatin'ny kianjan'i Hong Lim ao Singapaoro aza izy, tsy nahazo alalàna hanao izany kosa manoloana ny tranoben'ny Parlemanta. Faritra manokana ao anatin'ny kianja, fantatra amin'ny anarana hoe “Speakers Corner” (Zoro ho an'ireo Mpikiaka), no toerana tokana ara-dalàna ao Singapaoro azon'ireo olom-pirenena hanaovana hetsi-panoherana – arahanà fepetra sasantsasany. Nanomboka ny fampisehoana tao i Seelan, saingy nankany amin'ny Tranoben'ny Parlemanta nony avy eo.
Tomponandraikitra iray misahana ny serasera miaraka amin'ny ONG Engage Media sady mpiara-miasa amin'ny Global Voices. Ny kanton'i Seelan, mitondra ny lohateny hoe “32 Taona: Ny Fakàna am-Bavany ny Fitaratra iray”, dia nanome voninahitra ny mpiasam-panjakana iray mpikambana ao amin'ny Parlemanta Chia Thye Poh izay nofonjaina nandritra ny 32 taona tsy nandalo fitsaràna akory. Ny 23 taona tamin'ireo taona ireo no laniny tany ambadik'ireo karakara vy ary ny sivy taona hafa tsy fahafahana mivoaka ny tranony. Tamin'ny taona 1966 no voasambotra i Chia noho ny filazàna fa nitarika fihetsiketsehana manohitra ireo kaominista tao amin'ny firenena ary nanjary gadra politika ela indrindra teto an-tany hatramin'ny fivoahany ny taona 1998. Mpitsikera ny antoko politika teo amin'ny fitondrana ihany koa i Chia nanomboka ny taona 1960.
Nandritra ny fampisehoana nataony, nanontany mikasika ny fitazonana tsy misy fitsaràna ny mpisam-panjakana iray voafidy, nofonjaina nandritra ny 32 taona i Seelan. Manontany izy hoe:
Ny fanahin'olona afaka ve mety ho voagihy ao anaty faritra feperan'ny Fanjakana? ary amin'io fijery io ihany, moa ve ny asakanto iray malalaka mety ho azo fihazana ho ao anaty faritra iray feperan'ny Fanjakana?
Nambara tamin'ny Facebook ny fampisehoana zavakanto nataon'i Seelan tao an-kianjan'i Hong Lim
Taorian'ny nanokafany ny fampisehoana tao an-kianjan'i Hong Lim, nandeha an-tongotra roa kilometatra hatreny amin'ny Tranon'ny Parlemanta i Seelan, nitondra sary amin'ny fitaratra izay maneho ireo 32 taona nifonjàn'i Chia Thye Poh. 30 minitra taty aoriana, olona 12 avy amin'ny mpitandro filaminana no nisambotra an'i Seelan noho ny “fivorivoriana tsy ara-dalàna”, na teo aza ny tsy fisian'olon-kafa nandray anjara tamin'ny fampisehoana.
Ny sary eto ambany dia mampiseho fa irery i Seelan talohan'ny nisamboran'ny mpitandro filaminana azy.
Nosamborina ilay Singaporiana mpikatroka, @seelanpalay, noho ny fanoherany ny famonjana mandritra ny 32 taona tsy nisy fitsaràna an'ilay mpiasam-panjakana Voafidy tao amin'ny Parlemanta, Chia Thye Poh. pic.twitter.com/uwPaRjxzsy
Na eo aza anefa izany, araka ny lalàna henjana ao Singapore mikasika ny Filaminam-bahoaka, azo tazonina ho tompon'andraikitra nandray anjara taminà ivoriana tsy ara-dalàna na dia olona tokana aza.
Navoaka i Seelan tamin'ny 2 Oktobra. Nandefa an'ity hafatra ity teo amin'ny pejy Facebook-ny izy:
Misaotra betsaka anareo rehetra noho ireo teny mamy fanohanana. Tsy hay tohaina ny asakanto!
Na norahonana aza izy tamin'ny taona lasa noho ny maha-mpikatroka azy, nanambara tao amin'ny Global Voices i Seelan fa tsy mbola norahonana na nosamborina noho ny fantanterahany ireo asany amin'ny zavakanto izy.
Niteraka ireo tsikera avy amin'ireo mpampiasa media sosialy sy ny fiarahamonina sivily ilay tranga, indrindra fa taorian'ireo fisamborana hafa vao haingana nanjo ireo olona manao seho ara-javakanto imasom-bahoaka sy fihetsiketsehana. Ny volana jona, nanadihady ireo mpikatroka izay nandray anjara tamina fihetsiketsehana iray feno asa famoronana tao anaty metro iray tao an-tanàndehibe ny mpitandro filaminana, nitondra ny eritreritra ho aminà andiana fisamborana nataon'ny mpitantana ny fiarovana anatiny tamin'ny taona 1987.
Taorian'ny famonjàna an'i Seelan, maro ireo nitsikera ny Antoko Action Populaire (PAP) eo amin'ny fitondràna ho tsy mahay mandefitra amin'ireo mpanohitra tsy mitovy hevitra aminy:
Avy amin'ny fanamby sy fanoheram-bahoaka ny fandrahonana goavana nataon'ny PAP. Noho izy tsy mahazo toky tsara dia mailo fatratra izy ireo ka na dia fanoherana iray ataon'olon-tokana aza dia tena tsy maintsy arovana tsara.
Teo Soh Lung mpisolovava sy mpiaro zon'olombelona, miasa miaraka amina vondrona mpikatroka Function 8, nitsikera mikasika ny ‘sotasota’ ataon'ny mpitandro filaminana amin'ireo olona izay nanadihady mikasika ny sehon'i Seelan. Nanamafy izy fa nanao fanamparam-pahefana ny mpitandro filaminana tamin'ny alalan'ny fitakiana ireo taratasy mari-panondroana ny sasany tamin'ireo mpikambana amin'ny Functun 8 izay nanatrika ny seho nataon'i Seelan.
Izay hitantsika sy niainantsika omaly dia manamafy tsy am-pisalasalàna fa i Singapaoro dia Fanjakana Polisy ary misoko mangina ny asa fampihorohoroana ataon'ny fitondràna. Ny fahalalahana mivory, miteny sy maneho hevitra dia tsy hafa fa fampanantenana poakaty nataon'ny governemanta. Rehefa mandrahona hisambotra ireo mpitandro filaminana manampahefana ary mino fa azy ny fahefana, aiza ilay tany tan-dalàna izay hireharehan'ny governemantantsika sy ireo mpitsara manoloana izao tontolo izao?